K&K Program | AirKBZ
HOMEAbout usOur Vision & MissionOur PeopleOur CrewOur FleetWork with usBefore FlightTrafficAir Fare (in USD)Air Fare (in MMK)Excess Baggage RateAir Cargo RateBook Your FlightFlight ScheduleRoute MapDestinationsPassenger Sales AgentsPromotionsCheck-in ProceduresGroup Booking ProceduresTicketing Terms and ConditionsDuring FlightYour Guide to SafetyEntertainmentIn-flight MagazineRefreshment On-BoardAfter FlightKINNARI - KINNARA PROGRAMCUSTOMER FEEDBACK FORM
Flying Beyond Expectations
The Kinnari-Kinnara program and each of its parts are governed by the following rules.
Kinnari-Kinnara Program isafrequent flyer program (hereinafter referred to as “Kinnari-Kinnara”.
(1)The exercise of rights connected with Kinnari-Kinnara membership cannot be transferred fromaKinnari-Kinnara member to another person.
(2)Kinnari-Kinnara membership is open to any individual older than 18 years, withapermanent residence inacountry whose legislation does not explicitly prohibit membership in such program, and provided that the person fulfils all of the membership requirements.
(3)Anyone who wishes to becomeaKinnari-Kinnara member and make use of the benefits of the program must complete and signavalid Application. By signing, the person shall confirm that he is acquainted with the Rules and agrees to abide by them. An Application, available via the Internet on the AIR KBZ website, completed and submitted in electronic form, or enrolment made over the telephone, through the AIR KBZ Call Centre, shall be considered to constituteavalid Application.
(4)Membership takes effect as at the date Kinnari-Kinnara card has been issued.
(5)In the event that multiple Applications are received from one person, only one Application may be accepted.
(6)AIR KBZ reserves the right to expelamember from the program, should:
a. These Rules be breached;
b. The member express his disagreement with the Rules, or changes or amendments there to;
c. The “Detailed Terms and Conditions for the Carriage of Passengers, Baggage, and Goods in Air Transport” published by AIR KBZ be breached;
d. The conditions ofacontractual partner of the Kinnari-Kinnara program be breached.
(7)A Kinnari-Kinnara member may deliver, at any time during his membership,awritten or electronic termination request to the AIR KBZ Head office. The request must state the membership number, first name, surname, date of birth, date of membership termination, and, in the event ofawritten request, signature. An electronic termination request must be submitted from the e-mail address that the Kinnari-Kinnara member stated as his contact address; otherwise, the request cannot be accepted asavalid request for the termination of membership.
(8)As at the membership termination or member expulsion date, any and all claims and rights arising from Kinnari-Kinnara, thatamember may have with respect to AIR KBZ shall cease to exist.
အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းများသည် ကိန္ဒရီ-ကိန္ဒရာ အဖွဲ့ ဝင်များအတွက်အကျူံးဝ င်ပါသည်။ကိန္ဒရီ-ကိန္ဒရာအဖွဲ့ ဝင်အစီအစဉ်သည် AIR KBZ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ကြိမ်ဖန် များစွာစီးနင်း
သောခရီး သည်များအတွက် အထူးအခွင့်အရေးများ ပေးသောအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
ကိန္ဒရီ-ကိန္ဒရာအဖွဲဝင်များ၏ စည်းကမ်းများမှာ- အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) ကိန္ဒရီ-ကိန္ဒရာအဖွဲဝင်များသည် ၄င်းတို့ ၏အသင်းဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု မှုအား အခြားသူထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအားခွင့်မပြုပါ။
(၂)ကိန္ဒရီ-ကိန္ဒရာအသင်းဝင်ရောက်ရေးအတွက်အသက်(၁၈) နှစ် နှင့်အထက်၊အသင်းဝင်ရောက်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင်နိုင်ငံ၏တရားဝင်ပြဌာန်းထားသော တရားဥပဒေအရ ပိတ်ပင်တား စီးခြင်းမရှိ သူ၊နိုင်ငံအတွင်းအမြဲမှီခိုနေထိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မဆိုလွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
(၃)ကိန္နရီ-ကိန္နရာ အသင်းဝင်အဖြစ် အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားခွင့်ရလိုသူ သည် အတည်ပြုလျှောက်လွှာတွင်ပြည့် စုံစွာဖြည့်စွက်ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ လက်မှတ်ရေဒထိုးခြင်းဖြင့်အသင်းသားသည် ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း ချက်များကို လက်ခံပြီး ၊၄င်းဥပဒေ၊စည်းကမ်းများအတိုင်းလိုက်နာမည်ဟုသဘောတူညီပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်မှ AIR KBZ Web Site တွင်ရရှိပြီး mail စနစ်ဖြင့်ဖြည့်စွက်တင်ပြထားသောလျှောက်လွှာ(သို့ မဟုတ်) လက်ကမ်းစာစောင်မှ AIR KBZသို့ တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် အသင်းဝင်ထားသောလျှောက်လွှာ များကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမည် ဖြစ်သည်။
(၄)ယာယီကဒ် စတင်အသုံးပြုသောနေ့ မှစတင်၍ ကိန္နရီ-ကိန္နရာ အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်အကျုံးဝင်သည်။
(၅)အ ကယ် ၍ လူတစ်ဦးထံမှ(၁ခုထက်ပိုသော)လျှောက်လွှာများကိုရရှိပါက ပိုမိုပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာတစ်ခုကိုသာအတည်ပြုလက်ခံပေးမည်ဖြစ်သည်။
(၆)AIR KBZ မှ အသင်းဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်မှရပ်ဆိုင်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)အသင်းဝင်မှ ဖော်ပြပါဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားသဘောမတူညီ မှုအားဖော်ပြခြင်း၊ပြောင်းလဲမှု (သို့ မဟုတ်) တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကိစ္စရပ်များအားသဘောမတူညီခြင်း၊
(ဂ)AIR KBZ မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော “လေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေးဆိုင်ရာခရီးသည်ပို့ ဆောင်ရေး၊ခရီးသည် အိတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း မျးအတွက် အသေးစိတ်သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များ” အား ချိုးဖောက်ခြင်း၊
(၇)အသင်းဝင်များသည် စာဖြင့်ရေးသားထားသော(သို့ မဟုတ်) mail ဖြင့်ရေးသားပေးပို့ သော သဘောတူညီချက် ဖျက်သိမ်းခြင်းအား AIR KBZ ရုံးချုပ် သို့ ပေးပို့ နိုင်သည်။ ရေးသားပေးပို့ ရာတွင် အသင်းဝင် အမှတ်၊ အမည် ၊ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ အသင်းဝင်ရပ်ဆိုင်းလိုသည့်ရက်နှင့် (စာဖြင့်ရေးသား ပို့ ရာတွင် လက် မှတ်) စသည်တို့ ကို ဖော်ပြရမည်။ Mail ဖြင့်ရေးပို့ ပေးသောသဘောတူညီချက်ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းခံရာတွင် ကိန္နရီ-ကိန္နရာ အသင်းဝင်ရောက်စဉ်က အသုံးပြုထားသော Email Address မှသာပေးပို့ နိုင်သည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါက အသင်းဝင်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
(၈)အသင်းဝင်အဖြစ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ထုပ်ပယ်ခြင်းအခြားသောကိစ္စရပ်များအားလုံးသည် AIR KBZ မှဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။